अधिकृत नासु खरिदार Archives - सरकारी जागिर
Tag: अधिकृत नासु खरिदार
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के-कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? सुझाब दिनुहोस् । – १० सरकार र नागरिकको सम्बन्धको आधार : सार्वजनिक सेवा सरकारले नागरिकको हित एवं उन्नतिका लागि प्रदान गर्ने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । जनताको हित, भलाइ र कल्याणका लागि राज्यले त्यस्ता […]
February 19, 2019 July 24, 2019 Sarakari JagirLeaveaComment on नायब सुब्बाको लागि समसामयिक जानकारी
१. नेपालको इतिहासमा ‘पानीजहाज कार्यालय’ को स्थापना कहिले भयो ? > २०७५ फागुन २ (स्मरण रहोस् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रहेको यस पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको एकान्तकुनामा गरेका थिए भने पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले २०७५ पुस २९ गते गरेको थियो) २.सर्वसाधारणले राणाकालमा कर्मचारीलाई खुसी पार्न चढाइने > […]